PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-10-28 - Ubuxoki sebuyadlisa kuneqiniso
Ubuxoki sebuyadlisa kuneqiniso
Isolezwe ngeSonto - 2018-10-28 - IMIBONO -
ANGAZI noma ngiphila emhlabeni wami ngedwa yini noma mhlawumbe ngakhula ngiwumuntu othanda ukuzikhohlisa yini kodwa ngikholelwa kakhulu entweni eneqiniso phakathi.
Vele ngisho ungaliphila iqiniso kodwa abantu bayohlezi bekukhuluma kabi bathole nesici kuwena kodwa ngoba awenzeli bona kuyasiza kakhulu ukukhohlwa yibona.
Empilweni yami ngibonile ukuthi impilo injani, abantu bayayiphila impilo yobuxoki, ngendlela exakile kakhulu futhi manje ngibona sengathi kuya ngokuya kuyanyukela, ngisho ukuthemba umuntu kunzima ngoba ugcina ungasazi ukuthi uthembe bani.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngike ngabhala ezinkundleni zokuxhumana ngibuza ngayo le ndaba yobuxoki ukuthi ngabe obani abangamaxoki kakhulu phakathi kwabangani, umndeni womfana othandana naye/ umkhwenyana oshade naye, umuntu owake wathandana naye nase niyahlukana noma abantu osebenza nabo? Izimpendulo zakhona bezihlukene kaningi.
Angiqale ngokukubeka kubesobala ukuthi ngibala laba nje ngoba ngicabanga ukuthi sonke empilweni yethu sake sagilwa ngoyedwa walaba. Asiqale lapha kubantu esisebenza nabo ukuthi akuve kunzima uma sebenza ubuxoki ukuze bona babukeke bengcono noma befuna ukuthola izikhundla thizeni, okubuhlungu kunakho konke lokho uma sebefuna ukukuxoshisa ngisho emsebenzini ungazi ngampela ukuthi inkinga ikephi.
Ngiyaye ngizwe abantu bekhala ngezinye izinhlanga ukuthi izona ikakhulukazi ezinalobu buxoxi nokucindezelana bajike futhi bezokuhlekisa engathi akukaze kwenzeke lutho.
Umndeni kamfana yila bantu okumele ngempela uthobise inhliziyo uzitshele ukuthi akukho okumele ukulindele kubona okuhambisana nokubathemba.
Ayiminingi ngempela imindeni enomama abathembekile futhi abaneqiniso, ngizobalula kakhulu omama ngoba ibona kanye abanobuxoki obumangalisayo angiphathi-ke uma kukhona uskwiza noma oskwiza kusuke sekuvalwe ngehlahla ke lapho.
Omama babafana bangaba nje nomakoti abalishumi ngonyaka owodwa uthole ukuthi umama emdala enjalo uhambe eWhatsAppa eshutha nabo bonke labo “makoti” bakwakhe, futhi akanayo nencane inkinga uma bephuma bengena beshintshisane ejabuliswa nje ukuthi ingane yakhe iyisoka.
Kukhona omama abanganawo nakancane amahloni, umzali ohlulwa ukukhuza into uma ibheda, angenelele ukulungisa kuphela hhayi ukuvuna eyakhe ingane ukuze umfana wakhe akwazi ukuba indoda akwazi ukumisa owakhe umuzi naye ngelinye ilanga ababe besakhuzake phezu kwempilo yengane yakhe ukuthi ingahambi ilanda izifo, ihloniphe nekhaya okungenani.
Uma uke wahlukana nomuntu kwesinye isikhathi uvele afune ukukubukanisa nabantu akwenze umuntu ongayena.
Kuya nangokuthi umuntu okhule kangakanani nangomqondo, umuntu osekhulile uvamise ukukwazi ukulimela iqiniso. Abanye uyozwa sewuyisilwane nje esamhlupha, samjolela, samtshontshela umuntu ngoba nakhu angeke akwazi nje ukumela iqiniso. Ilento-ke ebuhlungu ngokujola nomuntu nihlukane ugcina usudume ngezinto kwawena ongazazi ngawe.
Okwabangani akuve kujulile futhi khona ngizokubalula kakhulu kunobuxoki bomndeni wakho ngoba abangani siyazikhethela kanti umndeni asizikhetheli siyawuphiwa.
Okubuhlungu ukuthi akubona bonke abangani abangalungile kodwa igama elithi mngani ligcina selingahambisani nje nezinto ezinhle lihambisana nobuxoki obuyisimanga. Ngalokhoke kubalulekile ukuba sizihlole thina kuqala ukuthi singabantu abanjani ukuze sikwazi ukukhetha abangani abanjengathi.
Siphila emhlabeni oya ngokuya ubanzima kakhulu, ngisho ukuba nabantu ongabathembi baya ngokuya bayancipha namanje ngisasho ukuthi uma singaphila izimpilo ezineqiniso nothando kungashintsha izinto eziningi emhlabeni wethu kuthatha nje ukuba nonembeza kuphela. Asiyiqhube le ndaba: Facebook: Jacinta Zinhle Ngobese
Twitter: @jacintangobese Instagram: jacintangobese Email: jacintazn@gmail.com